Fanaovan-dipoavatra Aluminium Continuant Heating Heating ao Shina
Induction Heating dia fomba voaporofo, azo itokisana ary mahomby amin'ny fanafanana hafanana aliminioma mamorona mafana. Na izany aza, ny firaka aliminioma dia manana fananana ara-nofo izay, raha tsy voaisa, dia mety hiteraka fanamby tsy ampoizina. Ny fahatakarana ireo lafiny tsy manam-paharoa amin'ny fanamafisana ny alimina dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fandinihana ireo fananana izay mahatonga ny aliminioma ho toy ny fitaovana mahasoa.
Satria ny alimine sy ny tadiny dia manome tombontsoa maro ho an'ny metaly maro hafa, tsy mahagaga raha mitaky ny fanamafisam-peo ny alim-bary ny fanadihadiana momba ny fitaovana famokarana fitaovam-pako. Ny ankamaroan'ireto fanadihadiana ireto dia mifantoka amin'ny fomba tsy mampitovy ny fanasitranana ny alim-bary induction heating ny fitaovana hafa - matetika ny kandra - ary ny fiovan'ny fahasamihafana eo amin'ny fahasamihafana, ny fahombiazany ary ny vokatra. Ny induction electromagnetique dia tsara indrindra ho an'ny fanamafisana ireo takelaka aluminio-alika. Na dia izany aza dia misy ny fanakianana sasantsasany, nefa azo tsinontsinoavina, ny zava-misy amin'ny aliminiara fandrehitra alimo izay tokony hodinihina rehefa manamboatra, miasa ary mitazona fitaovana toy izany.
Amin'ny ankapobeny, ny fanamafisam-peo ny famokarana alimo dia tsy misy hafa amin'ny an'ny fitaovana mahazatra hafa (ohatra: fananganana karbôna-vy sy vy). Izany dia ny fahasamihafana ara-nofo amin'ny farany izay manasaraka ny fanasitranana fanindronana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny metaly hafa. Ireo fahasamihafana ara-materialy, raha tsy misy ny famatsiam-bola, dia mety hiteraka fampisehoana fitaovana tsy ampoizina sy fanamby mahomby. Satria ireo mpampiasa ireo rafitra fampandehanana ankapobeny tsy mitsaha-mitombo dia mahazatra ny fanamafisana ny kofehy sy ny karbonina-vy ary ny fananganana vy miorina amin'ny alàlan'ny baolina kitra, manome tolo-kevitra mahazatra izy ireo amin'ny fiheverana ny fiterahana tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fananganana alika.
Ny HLQ Induction Equipment Co., Ltd dia manokana amin'ny continuous alofan'ny trano fandroana alimina/Aluminium takelaka fantsom-batana Ny fanamafisana ny alim-bary / bar / rods alohan'ny famokarana mafana, fanodinkodinana, famolahana hotakodina sy fanodinana, sns.
Sokajy Technologies Tags Aluminium takelaka fantsom-batana, Aluminium bar à foyer, Aluminium bordet foyer foyer, Aluminium takelaka fantsom-batana, Aluminium mpanafatra mpanamboatra fitaovana, Aluminium takelaka fanalefahana, Aluminium rafitra fanamafisam-peo, alofenofa alimina alimina, Aluminium induction reconnaissance billet, aluminium rod furnace foyer, Aluminium continin aluminée Post Fikarohana